Soundcore Liberty 3 Pro waa beddel cusub oo leh ANC iyo qeexid sare | Warka Gadget
Dhawaaqa waa shirkad maqal ah oo ka hawlgasha qaybtan cajiibka ah iyada oo soo saaraysa badeecooyin tayo sare leh, sida kuwii kale ee aanu halkan ku falanqaynaynay ee Gadget News ee qaabka Cambridge Audio ama Jabra. Markaa waxaan hadda hoos ugu dhaadhacnay ganacsiga Soundcore.
Waxaan si qoto dheer u eegeynaa Liberty 3 Pro ee cusub ee Soundcore, taleefoonnada dhagaha ee TWS ee leh ANC iyo maqal Hi-Res oo ka farxin doona isticmaaleyaasha. Nala soo hel sida Soundcore Liberty 3 Pro uu u taagan yahay iyo haddii ay dhab ahaantii ka soo baxaan dhammaan ballamahaas.
2 Tilmaamaha farsamada iyo "Codka Dahabka ah"
3 Joojinta qaylada gaarka ah iyo abka
4 Madax-bannaanida iyo faahfaahinta badeecada "premium".
Kuwan Liberty 3 Pro waxay leeyihiin nashqad kala duwan waana shay lagu mahadiyo suuqa taleefoonnada dhegaha ee TWS halkaasoo qaarkood ay u muuqdaan inay yihiin nuqullo toos ah oo kuwa kale ah. Xaaladdan oo kale, Soundcore waxay si xoog leh uga go'an tahay naqshad kala duwanaansho xitaa kiiskeeda, tani waxay u egtahay "kiniiniga" kaas oo furma isagoo kor u sii socda oo u muuqda mid aad u wanaagsan. Sida midabada, waxaan dooran karnaa caddaan, cawl cagaaran, lilac iyo madow. Waxay ku wareegsan yihiin caag taxane ah oo ku habboon dhegtayada, si aanay u dhicin oo aanay si sax ah u daboolin. Waxaas oo dhan iyadoon la iloobin in aan si dhab ah u wajaheyno sameecado dhegaha ah, taas oo ah, waxaa la geliyo dhegta.
Tusmada xirmada: Taleefannada dhegaha + Sideed suuf dhegaha silikoon ah + 3 dib-u-buuxinta dibadda + kiis dallacaadda + fiilada dallaca.
Cabirka kiiska iyo miisaanka: 7,1 x 5,5 x 2,7 cm iyo 45 garaam
Haddii aad jeceshahay iyaga waxaad ka iibsan kartaa qiimaha ugu fiican ee Amazon
Sidan oo kale, naqshadooda, waxay u oggolaanayaan wareegga hawada iyada oo loo marayo nidaam yareynaya cadaadiska gudaha dhegta oo ka dhigaya isticmaalka maalinlaha ah mid raaxo leh. Waxaan leenahay saddex dhibcood oo ergonomic aasaasiga ah, "fin" ee ugu sarreeya, caagga hoose iyo xajinta ku dhacda suufka silikoonka. Naqshad khalkhal galinaysa oo aad bay ugu raaxaystaan.
Tilmaamaha farsamada iyo "Codka Dahabka ah"
Hadda waxaan tagnaa farsamada kaliya. Waxaa lagu soo saaray kamarad hore iyo qaab-dhismeed u oggolaanaya in la yareeyo cabbirka iyo hagaajinta inta jeer ee codka. Waxa kale oo ku jira darawal gaashaaman iyo ugu dambayn 10,6-milimitir darawal firfircoon. Waxay markaa isticmaashaa ACAA 2.0 tignoolajiyada dhawaaqa coaxial iyadoo la joojinayo qaylada firfircoon iyada oo loo marayo nidaamka habaynta oo ay ku jiraan makarafoonada gudaha.
Codka codadka ee la taageeray waa LDAC, AAC iyo SBC, Mabda 'ahaan waxaan lahaan doonaa dhawaaq qaraar ah in kasta oo ayan la socon heerka Qualcomm's aptX. Waa in sidoo kale la ogaadaa inay yihiin taleefoonnada gacanta ee wireless-ka ah ee madaxbannaan, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si gaar ah u isticmaalno dhibaato la'aan.
Waxaan leenahay habkan dhawaaq la gaaryeelay iyada oo loo marayo nidaamka HearID iyo dhawaaqa ku wareegsan saddex cabbir. Sida aan ognahay inaad weli rabto inaad jimicsi la samayso iyaga, ma seegi kartid iska caabbinta biyaha ee shahaadaysan IPX4 taasi waxay xalin doontaa inta badan isticmaalka aan filan karno. Ma hayno macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan qalabka gudaha marka la eego isku xirka, waxaan ognahay inuu yahay Bluetooth 5 iyo in codec LDAC ee aan soo sheegnay uu noo ogolaado helitaanka codka Hi-Res, taas oo ah, xogta saddex jeer ka badan qaabka caadiga ah ee Bluetooth. . Anker Soundcore...
Joojinta qaylada gaarka ah iyo abka
Lixda makarafoon ee isku dhafan ee leh Sirdoonka Artificial Intelligence waxay sameeyaan joojinta dhawaaqa Liberty 3 Pro mid aad u wanaagsan oo aan awoodnay inaan ku mahadnaqno imtixaanadayada. In kasta oo waxaas oo dhan ay jiraan, waxaan ka faa'iidaysan karnaa saddex beddelaad oo kala duwan iyadoo ku xiran dhadhanka iyo baahidayada. Waxa ay ugu yeereen HearID ANC waxa ay tilmaamtaa heerka dhawaaqa ee dibadda iyo gudaha dhegta, si aan u habayn karno saddex heer oo ah joojinta sanqadhida laga bilaabo kan ugu hooseeya ilaa kan ugu sarreeya iyada oo ku xidhan nooca dhawaaqa aynu dareemayno. Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin "qaabka daahfurnaanta" ee khuraafaadka ah ee aan awoodin inaan tijaabino maadaama aysan ku jirin ilaa cusbooneysiin soo socota, nidaamkan waxaa loo yaqaan 'Enchance Vocal Mode'.
Waxaas oo dhan waxaan leenahay codsiga Dhawaaqa (Android / iPhone) oo leh hawlo fara badan iyo is-dhexgal isticmaale oo wanaagsan. Codsigan waxaan ku hagaajin karnaa falcelinta taabashada aan ku samayno taleefoonnada gacanta si aan ula falgalno kontaroolada taabashada, iyo sidoo kale beddelka goobaha isku xirka iyo doorbidyada aaladaha inteeda kale. Sidee u noqon kartaa haddii kale, waxaan leenahay nidaam siman oo aan ku ciyaari karno si aan u dooranno nooca aan jecelnahay.
Madax-bannaanida iyo faahfaahinta badeecada "premium".
Anker's Soundcore nama siin macluumaad gaar ah oo ku saabsan awoodda batteriga mAh ee taleefoonnada gacanta. Haa way noo balan qaadayaan 8 saacadood oo la isticmaalo hal kharash, taas oo la dhimay 10 ilaa 15 boqolkiiba imtixaanadayada iyada oo la joojiyo buuqa. Waxaan haynaa wadar ahaan horas 32 Haddii aan ku darno eedeymaha kiiska, kuwaas oo si la mid ah, waxaan joognay ku dhawaad ​​​​31 saacadood.
Kiiskan wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku dallaco sameecadaha dhegaha si markaa 15 daqiiqo gudahood waxay na siinayaan saddex saacadood oo kale oo dib u ciyaar ah. Sidoo kale, dallacaadda kiiska waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo fiilada USB-C, laakiin sidee bay noqon kartaa haddii kale waxaan haysanaa dallacaadda wireless-ka oo leh heerka Qi qaybteeda hoose, iyo sidoo kale saddex LEDs oo xagga hore ah oo nagu wargeliya xaaladda madaxbannaanida. Dhammaan xogtan ayaa wax yar wanaajisay kuwa ay bixiyaan Liberty Air 3 Pro iyo Liberty 2 Pro. Heerka madax-bannaanida, Liberty 3 Pro waxay ku jiraan heerka ugu fiican, inkasta oo cabbirkooda ay hore u siiyeen niyad wanaag ah inay lahaan lahaayeen heer sare. qaybtan.
Waxaan si farxad leh ula yaabnay kuwan Liberty 3 Pro tayada codka wanaagsan ee faahfaahsan halkaas oo aan ka heli karno dhammaan noocyada is-waafajinta iyo soo noqnoqda. Burburinta qaylada ayaa ah mid aad u wanaagsan, si dabacsan iyo firfircoon labadaba, iyo makarafoonadeeda wanaagsan ayaa siisay jawaab weyn baahida wicitaannada ama qabashada shirarka fiidiyowga. Xidhiidhka Bluetooth waa mid deggan dhinac walba. Waa wax cajiib ah, haa, kobcinta xad-dhaafka ah ee baska iyo in kontaroolada taabashada aysan si fiican uga jawaabin inta badan sidaan jeclaan lahayn. qiimihiisu waa ku dhawaad ​​159,99 euro Amazon iyo website-ka rasmiga ah ee Anker.
Xorriyadda 3 Pro
Codsi dhammaystiran iyo madaxbannaani
Bass aad loo xoojiyey
Xakamaynta taabashada mararka qaarkood way fashilantaa
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Soundcore Liberty 3 Pro waa beddel cusub oo leh ANC iyo qeexid sare
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, waa ciyaar waana qaali [Falanqaynta]